haino aman-jery > Journal succession > Journal succession 2018-01 > Ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny vahoakany
Ny tantaran'i Isiraely dia azo fintinina amin'ny teny hoe tsy fahombiazana. Ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olon'ny Isiraely dia resahina ao amin'ny bokin'i Mosesy ho fanekena, fifandraisana izay nanaovana voady sy fanekena. Na izany aza, araka ny asehon'ny Baiboly, dia nisy tranga maro isan'ny tsy nahombiazan'ny Isiraelita. Tsy natoky an 'Andriamanitra izy ireo ary nimonomonona tamin'izay nataon'Andriamanitra. Ny fihetsika mahazatra ny tsy fahatokisana sy ny tsy fankatoavana dia manenika ny tantaran'ny Isiraely manontolo.
Ny fahatokian'Andriamanitra no zava-nisongadina tamin'ny tantaran'ny firenen'ny Isiraely. Mahazo matoky tanteraka an'io isika anio. Koa satria Andriamanitra tsy nanary ny olony tamin'izany dia tsy handà antsika koa izy, na dia mandalo fotoanan'ny tsy fahombiazana aza isika. Mety hiaina fanaintainana sy fijaliana amin'ny safidy ratsy isika, saingy tsy mila matahotra isika fa tsy ho tia antsika intsony Andriamanitra. Tsy mivadika hatrany izy.
Fampanantenana voalohany: mpitondra
Nandritra ny andron’ny mpitsara, ny Isiraely dia tao anatin’ny tsingerin’ny tsy fankatoavana – fampahoriana – fibebahana – fanafahana. Taorian'ny fahafatesan'ny mpitarika tsirairay dia nanomboka indray ny tsingerina. Taorian’ny dingana maromaro toy izany, dia nangataka mpanjaka tamin’i Samoela mpaminany ny vahoaka, mba hisian’ny taranaka hitarika ny taranaka manaraka. Nanazava toy izao tamin’i Samoela Andriamanitra: “Tsy ianao no nolaviny, fa Izaho mba tsy ho mpanjakany intsony. Tahaka ny fanaony mandrakariva no ataony aminareo hatramin’ny andro nitondrako azy nivoaka avy tany Egypta ka mandraka androany izay nandaozany Ahy ka nanompo andriamani-kafa.»1. Sam 8,7-8e). Andriamanitra no mpitarika azy ireo tsy hita maso, nefa tsy natoky azy ny olona. Noho izany, Andriamanitra dia nanome azy ireo olona iray ho mpanelanelana izay, amin’ny maha solontena azy, dia afaka mitondra ny vahoaka hisolo azy.
I Saoly, mpanjaka voalohany, dia tsy nahomby satria tsy natoky an’Andriamanitra. Ary Samoela nanosotra an'i Davida mpanjaka. Na dia tsy nahomby tamin'ny fomba ratsy indrindra tamin'ny fiainany aza i David, ny faniriany dia ny hivavaka sy hanompo an'Andriamanitra. Rehefa afaka niantoka ny fandriampahalemana sy ny fanambinana izy, dia nanolotra an 'Andriamanitra hanangana tempoly lehibe ho azy ao Jerosalema. Tokony ho mariky ny faharetana io, tsy ho an'ny firenena ihany fa ho an'ny fiankohofan'izy ireo amin'ilay Andriamanitra marina.
Hoy Andriamanitra tamin’ny teny hebreo: “Tsia, ry Davida, tsy hanao trano ho Ahy ianao. Ary ny mifanohitra amin'izany kosa dia izao: Izaho dia hanao trano ho anao, dia ny taranak'i Davida. ho fanjakana haharitra mandrakizay izany, ary ny taranakao no hanao ny tempoly ho Ahy » (2. Sam 7,11-16, famintinana manokana). Mampiasa ny raikipohy momba ny fanekempihavanana Andriamanitra: “Izaho dia te ho rainy, ary izy ho zanako” (V 14). Nampanantena izy fa haharitra mandrakizay ny fanjakan’i Davida (V 16).
Fa na ny tempoly aza tsy naharitra mandrakizay. Nidina ny fanjakan'i Davida - ara-pivavahana sy ara-tafika. Inona no lasa fampanantenan'Andriamanitra? Tanteraka tao amin'i Jesosy ny teny fikasana ho an'ny Isiraely. Izy no ivon'ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olony. Ny fiarovana tadiavin'ny olona dia tsy hita raha tsy amin'ny olona iray izay misy maharitra sy mahatoky hatrany. Ny tantaran'ny Isiraely dia manondro zavatra lehibe kokoa noho ny Isiraely, nefa izy io koa dia ampahany amin'ny tantaran'ny Isiraely.
Fampanantenana faharoa: ny fisian'Andriamanitra
Nandritra ny firenireny tany an'efitra nataon'ny vahoakan'Israely, dia nipetraka tao amin'ny tabernakely Andriamanitra: "Nirenireny tao an-day Aho toy ny trano fonenana" (2. Sam 7,6). Ny tempolin’i Solomona dia naorina ho fonenan’Andriamanitra vaovao ary “ny voninahitr’i Jehovah nameno ny tranon’Andriamanitra” (2. Tan 5,14). Tokony ho takatra ara-panoharana izany, satria fantatry ny olona fa ny lanitra sy ny lanitra eny amin’ny lanitra rehetra dia tsy ho afaka hahazo an’Andriamanitra (2. Tan 6,18).
Nampanantena ny hitoetra eo amin’ny Isiraelita mandrakizay Andriamanitra raha mankatò azy izy ireo (1. Mpanjaka 6,12-13). Kanefa, satria tsy nankatò azy izy ireo, dia nanapa-kevitra izy fa “hanao izany eo anatrehany” (2. Mpanjaka 24,3), izany hoe nentiny ho babo any an-tany hafa. Tsy nivadika indray anefa Andriamanitra ary tsy nanda ny vahoakany. Nampanantena izy fa tsy hamafa ny anarany (2. Mpanjaka 14,27). Nibebaka sy nitady ny fanatrehany izy ireo, na dia tany an-tany hafa aza. Nampanantena azy ireo Andriamanitra fa raha miverina aminy izy ireo, dia hamerina azy ireo any amin’ny taniny, izay ho tandindon’ny famerenana amin’ny laoniny ny fifandraisana (5. Mosesy 30,1:5–; Nehemiah 1,8- iray).
Fampanantena fahatelo: trano mandrakizay
Nampanantena an’i Davida toy izao Andriamanitra: “Ary homeko fitoerana ny Isiraely oloko, ka hamponiko izy mba honenana any, ka tsy hatahotra intsony izy, ary tsy handrovitra azy tahaka ny teo aloha intsony ny olon-dozabe.”1. Chr 17,9). Mahavariana io fampanantenana io satria hita ao amin’ny boky nosoratana taorian’ny sesitany ny Israely. Ny tantaran'ny vahoakan'Israely dia manondro mihoatra ny tantarany - fampanantenana mbola tsy tanteraka izany. Nila mpitondra taranak’i Davida ilay firenena, nefa lehibe noho Davida. Nila ny fanatrehan’Andriamanitra izy ireo, izay tsy natao tandindona fotsiny tao amin’ny tempoly, fa ho zava-misy ho an’ny rehetra. Nila firenena tsy vitan’ny hoe haharitra ny fandriam-pahalemana sy ny fanambinana izy ireo, fa ny fanovana izao tontolo izao mba tsy hisian’ny famoretana mihitsy. Ny tantaran'ny Isiraely dia manondro ny zava-misy ho avy. Nisy zava-misy koa anefa teo amin’ny Israely fahiny. Nanao fanekem-pihavanana tamin’ny Israely Andriamanitra ary nitandrina izany tamim-pahatokiana. Olony izy ireo na dia tsy nankatò aza. Na dia maro aza ny olona niala tamin’ny lala-mahitsy, dia maro ihany koa ireo tsy nivadika. Na dia maty aza izy ireo nefa tsy nahita ny fahatanterahany, dia mbola ho velona indray izy ireo mba hahita ny Mpitarika, ny tany ary ny tsara indrindra, ny Mpamonjy azy ary hanana ny fiainana mandrakizay eo anatrehany.